Vidya Balan Uur Miyeey Leedahay: Jawaabta Xidigtaan Hana Siiso Xili Xasaasi Ah - Hablaha Media Network
Vidya Balan Uur Miyeey Leedahay: Jawaabta Xidigtaan Hana Siiso Xili Xasaasi Ah
HMN:- Atirishada caanka ah ee abaal marin walbo ku guuleesatay Vidya Balan ayaa siweyn la isla dhex maraayay maal mihii ugu dambeeyay inay uur leedahay.
Xidigtaan u dhaxdo filim soo saare Siddhrth Roy Kapur ayaa sheekadan ka hadashay xili xasaasi ah oo qof walbo sugaayay in Vidya arimaha uurkeeda banaanka soo dhigto.
Maalmo ka hor Vidya Balan oo xarun caafimaad kasoo baxeyso ayay sawir qaadayaasha arkeen waxayna iska soo qorteen in xidigtaan uur leedahay.
Vidya Balan oo la hadleeyay wargeyska Mi-Day waxay tiri “Waa wax ku carro galinaayo wararka qaar oo ay saxaafada qoreyso, isbitaal waxaan u aadi karaa waxa ugu sahlan hadii wajifa finin/nabro iiga soo baxaan”
“Laakiin haweenay kasto oo marwo ah hasii ay isbitaal aado micnaheeda ma ahan inay uur iska soo baareyso!!!!”
Vidya Balan sanadii 2012 ayay guursatay Siddhrth Roy Kapur ilaa haatana caruur iskuma dhalin waxayna xidigtaan tiri “Maalin walbo dadka nolosheena gaarka ah nooma daayaan waxayna na weydiiyaan xiliga aan caruur isku dhali doono”
“Waxaaba iigu darnaa adeerkey oo maalinkii aan Siddhrth Roy Kapur guursanaayay igu dhahay, marka xigta ee aan idiin imaado waxaan kaa rabaa adigoo sedex cunug Siddharth u heysid, xitaa hal ma ahan waxa uu rabay ee sedex ayuuba iska dhahay!!”
“Hadaba maxaa loogu waashay inaan caruur dhalno, waayo aniga ma ihi mashiinka caruurta sameeyo, hadaba war iyo dhamaantiisa tirada dadka aduunka wey sii kordheysaa, hadii lamaane dunida ku nool caruur dhalin waa wax iska caadi ah!!!”